Awekho Okukhathazayo Nge-Spam Yokudlulisa! Uchwepheshe we-Semalt Uyazi ukuthi Ungayisusa kanjani Ku-Google Analytics
Kuwo wonke umsebenzisi we-intanethi, ugaxekile kuyinkinga evamile ebonisa ukuthi kuyingozi kuweiwebhusayithi. Isibonelo, abantu abaningi bathola ama-imeyili avela kubathumeli abangaziwa, okuyizinto eziningi ezibangelwa ukuhlaselwa kwe-cyber. Inkinga iba yimbi nakakhulu umalaba spammers bahlose abantu abanamawebhusayithi. Ezimweni eziningi, ungase uhlangabezane nogaxekile wokudlulisela, lapho uthola khona enye ithrafikhikusuka ezindaweni ezinokwethenjelwa. I-traffic yenethiwekhi yokuthunyelwa kogaxekile ayiguqulwa futhi iholela ekutholeni okusheshayo. Ugaxekilebabe namathuluzi afinyelelekile kanye namakhono akwanele we-SEO ukuze uthole izizathu zabo ngokufanele.
I-Google Analytics ibonisa ukuthi ithrafikhi iyinkohliso ngokuzikhandla noma ukuthi uxhumana kangakananingekhasi lewebhu. Abakwa-Spammers banamandla okwenza ubukhoma be-inthanethi obungamanga, okungabenza bangahlukanisi nomgwaqo wangempela.Bangenza ukubukwa kwekhasi lokukhohlisa, ukukhushulwa kobuqili, imicimbi, idatha yokulandelela idatha kanye nokutholakala kwezindaba zenkohliso. Iningi laleziizigaxeke zenzeka ekhasini le-Google Analytics negama lomsingathi elilahlekile ukuze bakwazi ukushintshela esisha njalo.
uMichael Brown, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt Amasevisi weDividal, inikeza ukuqonda ngamanye amathiphu okulwa nendlela yokulwa nogaxekile wokudlulisela kanye nokuhamba kwezimoto.
Ama-bots amaningi e-spam ahloswe ekwenzeni i-website ithole ithrafikhi eminingi kanye nokwenzaisayithi landa inani lokubukwa..Ngenxa yalokho, abanye abantu bangazuza kulolu mgwaqo oyinyumba. Isibonelo, amawebhusayithi amaningi okubambisanazidinga ithrafikhi ngqo. Lo mphumela ungenza amaklayenti angomuso acabange ukuthenga kuthengisayithi ye-intanethi ngemibono eminingi nomaamakhasimende. Ngaphezu kwalokho, umgwaqo uletha umuzwa wokwethembeka, inhliziyo yokwenza ukuguqulwa kwe-intanethi.
Amanye amathiphu wokugwema ugaxekile wokudluliselwa
Amabhulokhi ayizinhlelo zokusebenza eziseqophelweni eliphezulu futhi zishesha ekwenzeni imisebenzi ephindaphinda ngaphezuluiwebhu. Bangakwazi ukwenza imisebenzi ethile ezenzekelayo kwiwebhusayithi njengabantu. Ngamanye amazwi, ama-rob ayenamarobhothi amancane angenza okunyeimisebenzi emihle efana nokukhomba okuqukethwe kwewebhusayithi o izinjini zokusesha. Kodwa-ke, abahlaseli basebenzisa lezi bots ukuze benze izinhloso zabo ezimbi njengokuthi:
Ukufaka amazwana nokubuka
Ukuvuna ama-imeyili kusuka kuwebhusayithi
Ukudala ama-akhawunti omsebenzisi amanga
Ukukhwabanisa kufisa ukwenza idumela lesayithi lomncintiswano liphele
Kufanele usebenzise izihlungi ezithuthukisiwe ze-bot ukuze uzikhiphe kude negama lakho lomsebenzisi. Kwamanyeamacala, abasebenzisi bangabhala phansi iphaneli yabo yokuphatha kanye nezinye izingxenye ezibalulekile ezisengozini yewebhusayithi. Kubalulekile futhi ukugqugquzelaamaklayenti ekuhlaselweni kogaxekile kokudluliselwa okujwayelekile. Ungabalondoloza emiphumeleni eminingi eyingozi eyenza abagaxekile abaphumelelayo bangasebenzisa ukuze baphumelele.
Kuneziningi zabantu abaku-intanethi abanenhloso yokugula ngaphandle lapho bahlose cishe zonkeumsebenzisi webhusayithi. Kubantu abanayo amasayithi, abakwa-spammers nabaduni bangaxhumana nomuntu osengozini bese beba idatha ebalulekile. GoogleAma-Analytics angakwazi ukubona futhi aqede amanye alawa ma-spam wokudluliselwa. Ugaxekile luqukethe izixhumanisi nezinhloso ezinonya kanyenjengeTrojans kanye nama-virus ngaphakathi kokunamathiselwe kwawo. Abanye babo bangadonsa iphaneli yokuphatha bese beba idatha ebalulekile njengekhadi lesikweletu samakhasimendeulwazi. Ungagwema ugaxekile usebenzisa lo mhlahlandlela. Ukuphepha kwewebhsayithi yakho kungahlala kuqinile futhi kwenza isayithi lakho lihlanzeke futhi likhululekilekusuka kubaduni.